Isikhokelo Sempawu Zekliniki Yasemayo
Ukuqhagamshela kuncedo olukude kwiWindows 7
NguNancy C. Muir
Ngeempawu ezininzi zeWindows, ubophelelekile ukuba ungene kwinto engasebenziyo okanye engekho lula ukuyifumana. Enye yeendlela ezilungileyo zokusombulula iingxaki kukunxibelelana noncedo olukude kwaye ubukele ngelixa umhlobo onamava ephumelela.
Uncedo ekude luphawu lweNkqubo yoNcedo kunye neNkxaso apho uvumela omnye umsebenzisi athathe ikhompyuter yakho nge-Intanethi kwaye abone ingxaki yakho. Ungahlala phantsi, ubukele kwaye ufunde. Kwaye ukuba awuyithandi into eyenzekayo, ungalahla uqhagamshelo ngonqakrazo. Ukwenza Uncedo olukude:
Ukukhetha ukuqala → iPhaneli yokuLawula → Inkqubo kunye noKhuseleko → Inkqubo → Useto kude.
Qiniseka ukuba i-tab ekude yeNkqubo yeeMpawu zebhokisi yencoko yababini iyabonisa.
Khetha Vumela uqhagamshelo loncedo olukude kule Khompyuter ibhokisi yokujonga kwaye ucofe u-Kulungile.
Ibhokisi yencoko yababini beNkqubo yeeMpahla iya kuvalwa.
Vula uNcedo lweWindows kwiNkxaso. Cofa kwindawo ethi Buza kwaye ucofe ikhonkco loncedo olukude lweWindows.
Kwifestile ebonakalayo, cofa indawo ethi Mema Umntu Omthembileyo ukuba Akuncede.
Kwiphepha elivelayo, unokukhetha ukusebenzisa i-imeyile ukumema umntu ukuba akuncede.
Isimemo esingagqibekanga se-imeyile esiveliswe ngoncedo olukude lweWindows
Cofa kuThumela esi simemo njengekhonkco leFayile ukwenza ifayile onokuyincamathisela kumyalezo we-imeyile.
Cofa ku Sebenzisa i-imeyile ukuze uthumele ikhonkco lesimemo ukuthumela isimemo njenge-imeyile kwinkqubo esemgangathweni ye-imeyile, enje nge-Outlook.
Khumbula ukuba kuxhomekeke kuwe ukwazisa ummkeli ngegama eligqithisiweyo- alifakwanga kwi-imeyile yakho ngaphandle kokuba uyayongeza.
KwiWindows Window yoNcedo kude, qaphela igama eligqithisiweyo.
Nangona ukusebenzisa igama eligqithisiweyo ebelikhethwa ukuba likhethwe kwiWindows XP, kunyanzelekile kwiWindows 7, kunye negama lokugqitha olisebenzisayo kufuneka libe nabalinganiswa abathandathu ubude.
Xa unxibelelwano olungenayo lwenziwe, sebenzisa izixhobo kwi-Remote Uncedo lwewindows ukulawula iseshoni.
Unokufumana izixhobo zokuhlengahlengisa useto, uxoxe, uthumele ifayile, okanye unqumame, urhoxise, okanye uyeke ukwabelana.
Xa ugqibile, cofa u-Vala iqhosha lokuvala iwindow yoNcedo lweWindows ekude. Ukuba ufuna iphasiwedi, yifake kwaye uyiqinisekise.
Umnxeba uza kuphela.
Yintoni oyithathayo umqala obuhlungu
Uluhlu lwe-angiotensin receptor blockers
Iityuwa zokuhlamba abasebenzisi beziyobisi
iziphumo ebezingalindelekanga ze-lsd
unxantathu onamacala amabini alinganayo
Yeyiphi iyeza lokunyanga i-chlamydia
Suboxone sublingual ifilimu 8mg 2mg